R/Wasaare ku xigeyn Turkiga oo Muqdisho ku soo Wajahan & Amaanka oo la Adkeeyey | KEYDMEDIA ONLINE
R/Wasaare ku xigeyn Turkiga oo Muqdisho ku soo Wajahan & Amaanka oo la Adkeeyey
Mogadisho, (Keydmedia) - Wafdi uu hogaaminaayo Ra'iisul wasaare ku xigeynka Dowladda Turkiga Bekir Bosdag ayaa saaka ku soo wajahan Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho, ayadoona guud ahaan amaanaka Caasimada saaka si aad ah loo adkeeyay.
Wadooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho gaar ahaana wadada ka soo baxda Garoonka Aadan Cade ee soo aada Xarunta Madaxtooyada ayaa lagu arkayaa Ciidamo aad u qalabeysan oo isugu jira kuwa AMISOM iyo Ciidamada kala duwan ee Dowladda KMG ah.
Ciidamada ayaa ah kuwo aad u feejigan waxaana y baaritaano kala duwan ay ku sameenayaan Baabuurta Dadweynaha iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay ee is ticmaalaya wada soo gasha Madaxtooyada.
Socdaalka Bekir Bosdag Ra'iisul waraae ku xigeynka Turkiga ayaa la sheegay inuu la xariiro qiimeynta waxa iska badalay xiligii uu Ra'iisul wasaara Turkiga Rajap uu Muqdisho yimid ilaa iyo hadda xaalada Bani'aadanimada Soomaaliya iyo midda dhanka amaanka.
Keydmedia.net kala soco wixii ku soo kordha.
Keydmedia - Xafiiska Muqdisho